म से’क्सी नहुँदा श्रीमानले दिए यस्तो पिडा, गर्थे श्रीमतीलाई यस्तो हर्कत ! श्रीमतीले खुलाईन श्रीमानको हर्कत « गोर्खाली खबर डटकम
म से’क्सी नहुँदा श्रीमानले दिए यस्तो पिडा, गर्थे श्रीमतीलाई यस्तो हर्कत ! श्रीमतीले खुलाईन श्रीमानको हर्कत
एजेन्सी । भारतस्थित विहार राज्यको राजधानी पटनाकी एक महिलालाई उनका श्रीमानले र’क्सी नखाएको र छोटा कपडा नलगाएको ‘आकर्षक’ नदेखिएको भन्दै उनलाई तीन तलाक दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । श्रीमानले आफूलाई आधुनिक बन्न दबाब तथा फरक–फरक कपडा लगाउन दबाब दिँदै आएको उनले बताइन् । भारतीय न्युज एजेन्सी एनएनआईसँगको कुराकानीका क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘सन् २०१५ मा इमरान मुस्ताफसँग मेरो विवाह भएको थियो । विवाहको केही दिनपश्चात हामी दिल्ली गयौं,’ उनले एनएनआईसँगको कुराकानीमा भनेकी छिन्, ‘केही महिनापछि पतिले मलाई पनि शहरका अरु महिला जस्तै आधुनिक बन्न दबाब दिइरहन्थे । उनी चाहान्थे कि म छोटा कपडा लगाउँ, नाइट पार्टीमा जाउँ, र’क्सी खाउँ । यसलाई मैले इन्कार गरिदिएँ । जसका कारण उनी मलाई पि’ट्ने गर्दथे ।’ सौर्य दैनिकमा खबर छ ।
पाकिस्तानमा विभिन्न कम्पनीहरुद्धारा व्यापक वित्तीय ठगी भएको विश्व बैंकको रिपोर्ट